ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ချက်ချင်းရပ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ချက်ချင်းရပ်
st. anza said...
ဒေါ်စုဟာ လူညစ်လူပတ်တွေကြားထဲမှာ အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေရတာမို့ သူ့အတွေးအခေါ်အရ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်လမ်းကို အခက်အခဲ များစွာရဲ့ကြားမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လုပ်နေရတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆောင်းပါးရှင်ပြောသလို အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိပါတယ်။ အကျိုးဆက်တွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေတာမို့ ဘက်ပေါင်းစုံ ချိန်ဆနေရဟန်တူပါတယ်။ သူရောက်နေရတာက လူများရင် လေးထောင့်ကနေ အ၀ိုင်းဖြစ်သွားတတ်တဲ့ တစ်မတ်သားလွှတ်တော်ဆိုတာကို ဖြည့်စွက်တွေးကြည့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ခုထိ၉၉%ယုံကြည်နေတာကတော့ ဒေါ်စုဟာ အမျိုးသားရေးအပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မကောက်ကျစ်ဘူး၊ သစ္စာမဖေါက်ဘူးလို့ ယုံပါတယ်။
အောင်-စု-တင် ကာလတုန်းက ကျောင်းသားတွေကို အသုံးချခံအဖြစ် လုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ရှုံ့ချတဲ့ စကားလေး အမှတ်တရ ကြည့်စေချင်တယ်..
ဒေါ်စုပြောတဲ့စကားက ၂ မိနစ်လောက်မှာ စပါတယ်။
that bitch is became side of army, what she can do?? what she did?? just silent and fucking stupid, ...
I agree she would not betray national cause. But the problem is that she is absolutely useless. She knows nothing about Burmese politics even after 25 years experience. She knows nothing about Burmese regime. She is the most awarded and the most useless.
Ko aung hmine,
Have you been to copper mine? If not,you should not write any post about it.